Amai Matsikenyere Vakatora Chigaro chaMushakabvu Gwaradzimba Vokurudzirwa Kushanda neMapato Ose muManicaland
Mushakabvu Doctorr Ellen Gwaradzimba
Vamwe vagari vedunhu reManicaland vakawanda vanoti vari kutarisira zvizhinji munyaya dzebudiriro kubva kugurukota richangobva mukutoreswa mhiko kuti rimirire nzvimbo iyi, Amai Nonkuthula Matsikenyere, avo vakatsiva Amai Ellen Gwaradzimba vakashaya nechirwere cheCovid-19.
Mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakadoma Amai Matsikenyere, avo vanova mumiriri weChimanimani West mudare reparamende, kuti vatsive vende rakasara iri.
Amai Matsikenyere inhengo yeZanu PF vari mutevedzeri wasachigaro kubazi remadzimai mudunhu reManicaland.
Vakawanda vanoti Amai Matsikenyeri vanotarisirwa kuenderera mberi nebasa raiitwa nemushakabvu rekusimudzira dunhu, nekuwanira madzimai, nevechidiki mabasa akasiyana siyana kuti vawane chouviri.
Vamwewo vanoti chakanyanya kukosha panguva ino kuti Amai Matsikenyere vabatanidze vagari zvisineyi nekuti abuda mumba maani.
Mugari wekuNyanga, VaPatrick Nyakatsapa, vanoti gurukota idzva iri rinofanira kushanda nekanzuru yeMutare kwete kuita simuka tienzane.
VaNyakatsapa vanoti Amai Matsikenyere vanotarisirwa zvakare kuona kuti hupfumi hwezviwanikwa hwagoverwa zvakaringana.
Mumwe mugari weManicaland, Amai Blessing Nyika, vanoti itarisiro yavo kuti Amai Matsikenyere vawanire vechidiki nemadzimai mikana yemabasa emaoko
Meya weguta reMutare, VaBlessing Tandi, vanotiwo Amai Matsikenyere vanotarisirwa kuva muyananisi wevanhu vose zvisineyi nezvematongerwo enyika.
Mumwe wevatungamiriri vesangano remachechi emudunhu reManicaland reChurches of Manicaland, Reverand Edward Tswamuno, vanoti vanotarisira Amai Matsenyere kuti vasateme vakarerekera rimwe divi.
Studio 7 yakabata Amai Matsikenyere kuti tinzwe divi ravo asi vakati vainge vachiri vakamirira kugadzwa zviri pamutemo kuti vazokwanisa kutaura pamusoro pehwaro hwavo hwebudiriro yedunhu reManicaland.
Vakatoreswa mhiko neMuvhuro.
Amai Matsikenyeri vakazvarwa mugore ra1964 kuMberengwa vakadzidza paMakuva Primary School vakazoenda kuMasume Secondary. Vakaita zvidzidzo zvepamusoro soro paUniversity of Zimbabwe.
Vane degree rezvekurairidza uye vakashanda kubazi rezvedzidzo kwemakore anosvika gumi nemashanu.
Zvichakadaro, bato reZanu-PF rakaitawo sarudzo neMugovera dzekutsvaga anotora chigaro chekuvaSenator chakasiiwa naAmai Gwaradzimba.
Amai Dorothy Mabika ndivo vakakunda kunyange hazvo vamwe vezvematongerwo enyika vari kuti vari kushamisika kuti sei bato iri riri kubvumidzwa kuita sarudzo iyo hurumende yakamisa nyaya dzemagungano akadai senzira yekudzivirira chirwere cheCovid-19.